Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Östergötlands län / Åtvidaberg
Degmada Åtvidaberg waxeey u dhaxeeysaa xeeb iyo Magaalo weyn, waxeeyna leedahay dhul qani ku ah balliyaal, doog, xoolo iyo hawo aad u wanaagsan. Degmada Åtvidaberg waxeey kaloo leedahay taariikh soo jireen ah oo ah dhinaca beeraha iyo kubbada cagta.
780 kiilomitir oo laba jibaaran
Linköping 37 kiilomitir
Norrköping 64 kiilomitir
Stockholm 221 kiilomitir
La xiriir xarunta isdhexgalka dadka ee degmada oo laga wici karo
taleefan nambarka: 0120-830 00
Degmada waxeey heshiis ah, ineey sanad kasta qaabisho 20 qaxooti, lagashay maamulka gobolka, dadka eey qaabisho ayaa waxeey ku kala hadlaan luqado kala duwan. Luqadaha ugu badan ee looga hadlo degmada waxeey ku xirantahay inta ajaanib oo usoo guurto ama ka guurto degmada. La xiriir xarunta isdhexgalka dadka ee degmada hadii aad rabtid inaad ogaato luqadaha ugu badan ee loogu hadlo degmada.
Wax Jaaliyado ah kama dhisna degmada, hase yeeshee waxeey ka dhisan yihiin magaalooyinka waaweyn ee dariska la ah degmada
Bartamaha degmada Åtvidaberg waxaa ku yaal dukaamada cuntada, dukaamo yaryar, maktabad, xafiiska shaqada, dukaan gacan labaad, dugsiga xanaanada carruurta, dugsi hoose-dhexe iyo sare, dukaamo dhar oo weyn waxeey ku yaallaan degmooyinka dariska ah.
Dugsiyada xanaanada carruurta waxeey ku yaallaan Åtvidaberg iyo tuulooyinka Grebo, Björsäter iyo Falerum. Muddada safka loo galo dugsiyadaas waa ku dhawaad afar billood. La xiriir xarunta isdhexgalka dadka ee degmada hadii aad rabtid inaad wax ka ogaato ogaato daryeelka carruurta.
Dugsiyada hoosedhexe waxeey ku yaallaan bartamaha degmada Åtvidaberg iyo tuulooyinka Grebo iyo Björsäter. Åtvidaberg waxaa ku yaal dugsiga sare ee Åtvidabergs gymnasieskola waxaana lagu bartaa barnaamijyada caadi ah oo dhan.
Åtvidaberg waxeey kuu heysaa waxbarashada dadka waaweeyn iyo barashada luqada iswiidhishka oo loogu tala galay dadka aan kasoo jeedin asal ahaan wadanka iswiidhan.
Åtvidaberg waxaa ku yaal rug caafimaad, rugta daryeelka hooyooyinka, rugta daryeelka carruurta iyo rugta daryeelka ilkaha.
waxaa jira caawimaad turjubaan marka aad la kulmeeysid shaqaalaha xarunta adeega bulshada iyo xafiisyada kala duwan. Caawimaada Turjubaan ee dhinaca taleefanka ayaa ah kan la isticmaalo badanaa.
Degmada Åtvidaberg waxeey leedahay basas iyo tareenno aada meela kala duwan. Waxaa jira bas iyo isku xira Åtvidaberg iyo Lidköping. Waxaa isna jira tareen isku xira Åtvidaberg, Lidköping iyo Västervik.
Jedwalka wakhtiga waxaad ka heli kartaa Östgötatrafiken.
Shaqo bixiyayaasha ugu waaweeyn waa kuwa ku yaal degmooyinka dariska ah. Åtvidaberg waxaa ku badan milkiilayaasha shirkadaha yaryar. Heerka shaqa la'aanta ee degmada Åtvidaberg waxuu la mid yahay sida degmooyinka eey isla midka yihiin ee Iswiidhan.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Åtvidaberg